Baomba ... Lavitra!: Tetikasa vaovao iray mitrandraka baomba sy fitaovam-piadiana nokleary - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Jolay 22, 2021 fandaharam-pianarana, Vaovao sy hevi-dehibe 0
(Navoaka avy amin'ny: Fampirantiana baomba.)
Baomba… Mandehana! dia tetikasa iray hijerena ny fiantraikan'ny daroka baomba an'habakabaka amin'ny sivily mandritra ny Ady Lehibe Faharoa ary hampiasa ny tahiry tsy manam-paharoa an'ny The Peace Museum UK handinihana ny fomba niforonan'ny fandriam-pahalemana ho setrin'izany. Ity tetik'asa ity dia tokony hapetraka ao amin'ny tranombakoka ho fampirantiana amin'ny Mey 2020, saingy nahemotra noho ny areti-mandringana covid-19. Faly ny mozea fa afaka nanolotra an'ity tetikasa ity ho fampirantiana dizitaly. Ny tetik'asa dia azo atao noho ny famatsiam-bola avy amin'ny National Lottery Heritage Fund.
Tsindrio eto raha hiditra amin'ny “Bombs… Away!” fampirantiana an-tserasera
tranom-bakoka # fiadanana
Tambajotran'i Nizeria sy fanentanana ho an'ny fandriam-pahalemana momba ny fandriam-pahalemana hikarakara fifanakalozan-kevitra momba ny fanabeazana
Ny GCPE dia manasonia ny Compact on Women, Peace, and Security and Humanitarian Action. Miaraha manantona anay!
Enga anie 28, 2021 Opinion 0
Fampianarana fandriampahalemana avy amin'ny Tales of the City: Fanabeazana ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny Memoryscapes of Nagasaki
Desambra 25, 2017 Research 0
Hatraiza no ahafahan'ny tontolon'ny fahatsiarovana tanàna mandray anjara amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana? Ity taratasy nosoratan'i Patporn Phoothong ity dia milaza fa ny fitantarana dia sady mamorona no manimba ny sarin'ny fandriampahalemana. Ny tsy fahombiazan'ny tranombakoka fandriam-pahalemana mamorona fahitana mahomby amin'ny fandriam-pahalemana dia mampihena azy ireo amin'ny haavon'ny tranombakoka manan-tantara. Ity fikarohana ity dia mamarana amin'ny famaritana ireo anton-javatra manohana ny fahatsapana ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana amin'ny tranombakoka fandriam-pahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Ny baomba any Bruxelles: Inona no azontsika atao
March 23, 2016 Vaovao sy hevi-dehibe 2
Manoloana ny fanafihana any Bruxelles sy Mosul, ny ady tany Syria, Iraq, Libya ary Yemen, ny fanafihana tany Paris taloha, ary ny toa herisetra, fampihorohoroana ary ady hatrany amin'ny faritra maro amin'ny faritra maro. izao tontolo izao, maro amintsika no matetika mahatsiaro ho tsy manan-kery - sisa manontany tena hoe inona no azontsika atao ary na hijanona na hiova izy io. Kai Frithjof Brand-Jacobsen, Talen'ny Departemantan'ny Fandriam-pahalemana (DPO) ao PATRIR dia manome sosokevitra 10 azontsika atao mba handresena ny horohoro sy ny ady hitantsika. Anisan'ny soso-keviny, ho an'ny eo ho eo, salantsalany ary maharitra: miasa hanana fanabeazana ny fandriam-pahalemana tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana fototra ho an'ny sekolintsika sy ny rafi-pampianarana manerantany. [tohizo ny famakiana…]